तिमी यत्ति धेरै किताब कापी बोकेर कसरी स्कुल जान्छौ? जेम्सले अचम्म मान्दै सोध्यो। अभिनव हाँस्यो मात्रै। जेम्सको कौतुहलता मेटिएन। उसको कौतुहलता देखेर अभिनव अचम्ममा पर्यो। 'तिम्रो स्कुल ब्याग गह्रुँगो हुँदैन?,' अभिनवले सोध्यो। जेम्सले 'नो' भन्दै टाउको हल्लायो। 'होमवर्क नि?,' अभिनवले फेरि सोध्यो। जेम्सको जवाफ थियो, कहिले काहीँ मात्रै हुन्छ, त्यो पनि क्लासमा नभ्याए। जेम्ससँग छुट्टिएपछि अभिनवले मसँग सोध्यो, 'बाबा हाम्रो स्कुल ब्याग किन गह्रुँगो? हामीलाई किन सधैँ यत्ति धेरै होमवर्क?'
यी कलिला छोराछोरी दिनहुँ यत्रो भारी बोकेर स्कुल आउने जाने गर्दा रहेछन्। स्कुल जाने बेला सधैँ हातमा दुई तीनवटा किताब र कापी बोकेको देखेर एक दिन मैले छोरीलाई गाली गरेको थिएँ, 'किताब ब्यागमा नराखेर किन बोकेकी?' छोरीले झर्किएर उत्तर दिएकी थिई – ब्याग कस्तो गह्रुँगो छ!
पुस्तकको भारी जतिसुकै बोकाए पनि हाम्रो शिक्षण पद्धती तीन चार दशक अघिकै अवस्थामा छ। विद्यार्थीहरु गुरुले जे सिकायो त्यही घोक्छन्। विद्यार्थीहरुलाई सिकाइएको कुरा उनीहरुले कुन हदसम्म बुझेका छन्? जाँच गर्ने आधुनिक प्रविधि र शैली छैन। केवल पास हुने उद्देश्यले कण्ठस्थ पार्न सिकाइएको शिक्षाले विद्यार्थीमा जीवनोपयोगी कुराको विकास हुन दिँदैन। अनि फरक ढंगले लेखिएको उत्तर गुरुलाई चित्त बुझ्दैन। किनभने हाम्रा गुरुहरुलाई फरक कुरा जाँच्ने फुर्सदै हुँदैन। क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिएका विद्यालय संचालकको दबावमा कोर्स पूरा गर्ने बाहेक उनीहरुको अरु ध्यान नै हुँदैन।
विद्यालय सञ्चालकहरु विद्यार्थीलाई जति पुस्तकको भारी बोकाइयो विद्यालयको गुणस्तर त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछन्। धेरै पुस्तक, धेरै कपी नदिए विद्यार्थीले पढ्न सक्दैनन् ठानिन्छ। अनि अभिभावकले विद्यालयलाई राम्रो ठान्दैनन् कम भारी बोकायो भने।
विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरुमा बढ्दो यस्तो मानसिकताले भारी झोलाको समस्या समाधानतिर जानु भन्दा झन् बढ्दै गएको छ। मनोविद् मोरिस एल बिगीका अनुसार– ‘विद्यालयको उद्देश्य विद्यार्थीलाई स्थानान्तरका लागि सिकाउनु हो ।’ यदि हाम्रा बालबालिका आफूले पढेका कुराबाट अर्थपूर्ण सिकाइको विकास गर्न सक्दैनन्, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहित हुँदैनन् र आफुले सिकेका कुरा परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने त्यो शिक्षाको अर्थ केही रहँदैन। बोक्न नसक्ने भारी झोलाले मात्रै पक्कै दिमाग भरिने होइन।
स्कुलमा नै लकरको व्यवस्था गर्न सके विद्यार्थीको भारी झोलाको समस्या निकै कम हुनेछ। यसमा विद्यालय सञ्चालकहरु सचेत हुन आवश्यक छ। बालबालिकाको स्वास्थको ख्याल गरेर अभिभावक आफै पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। यसका लागि सकभर स्कुल ब्यागको तौल बच्चाको तौलको १० प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रयास नै न्यायोचित हो। अनावश्यक पुस्तक र कपी घरमै राख्दा केही फरक पर्दैन। ब्यागको साइज अथवा चौडाई बच्चाको छातीको चौडाई भन्दा बढी हुन नदिने मापदण्ड नै आवश्यक छ। चौडा बेल्ट (स्ट्रिप) भएको ब्यागमात्र बोक्न दिनुपर्छ। दुवै कुममा बराबर पर्ने गरी ब्याग बोक्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। एक कुमलाई मात्रै बोझिलो हुने गरी ब्याग बोक्न दिनु पूरै गलत हो। ब्याग कम्मर भन्दा मुनि झुन्डिने गरी बोक्न दिँदा थप तौल बढ्छ। यी ब्याग बोक्ने वैज्ञानिक काइदाले बालबालिकाको मेरुदण्ड, कुम र गर्दनलाई अधिक भार बोक्दा हुने नोक्सानबाट बचाउने काइदा हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले प्रमाणित गरेका यी तरिका बढ्ने उमेरका बालबालिकाको सिकाइमा सहयोगीको भूमिका निभाउने निश्चित छ।